ट्रम्पको शासनकालमा अमेरिकाले विश्वको नेतृत्व गुमाएको हो ?
scheduleशनिवार जेष्ठ १ गते, २०७८
साझापोष्ट टिप्पणी/काठमाडौं, १३ चैत । भनिन्छ– नेतृत्व भनेको अप्ठ्यारो समयको भूमिका हो । संकट मोचन गर्ने क्षमता हो । समस्या समाधान गर्ने विधि र प्रक्रियाको संवाहक हो । संकटमा जसले आफ्ना अनुयायी, शुभेच्छुक र आशावादीहरुलाई निराश बनाउँछ, ऊ नेता हैन ।
संकटको समयका जो समस्यासंग पिठ फर्काएर भाग्छ– उसलाई नेता मान्नु पर्ने आवश्यकता रहँदैन । जसले संकटको समाधान पत्ता लगाउने, लागू गर्ने क्षमता राख्दैन । उसले पाइरहेको भूमिका पनि गुमाउँछ, रङ्गमञ्चमा अर्को कोही आउँछ, ऊ नै नेता हुन्छ ।
समकालीन विश्वमा अमेरिकालाई त्यस्तै एउटा नेतृत्वदायी मान्ने गरिएको थियो । यो भूमिका उसले सजिलै पाएको थिएन । सन् १७७९ मा अमेरिका बेलायती साम्राज्यबाट मुक्त भयो । विश्वको मानचित्रमा अमेरिका एक नयाँ मुलुक, नयाँ राज्य, नयाँ देश थियो । तर बेलायती साम्राज्यबाट मुक्त भएसंगै उनले विश्वका लागि केही फरक र उदाहरणीय गुणहरु देखायो ।
अमेरिकाका संस्थापक पिताहरु त्यो युगका सर्वाधिक योग्य योद्धा र चिन्तकहरु थिए । जर्ज वासिङ्गटन, थोमस जेफरसन, जोहन आडम्स, बेन्जामिन फ्रेकलिन, अलेक्जेण्डर हेमिल्टन, जेम्स मेसिडन, जोहन जोयको नाम आज पनि संसारले सम्मानका साथ स्मरण गर्दछ । अमेरिकाकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्र एक अदभूत शब्दलालित्यमा बुनिएको राजनीतिक दस्तावेज थियो, जसमा व्यक्त भएको स्वतन्त्रता, समानता, न्याय र मुक्तिका आधारभूत सिद्धान्तप्रतिको निष्ठाले संसारलाई नै उद्धेलित गर्दथ्यो । उनीहहरुले अपनाएको प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीले विश्वलाई नै एक फरक प्रकारको शासनशैलीको उदाहरण दियो ।
तर त्यति कारणले मात्र विश्वमा अमेरिकाको भूमिका स्थापित भएको थिएन । स्वतन्त्रतासंगै उसले आधुनिक विज्ञान, प्रविधिको विकास र अर्थतन्त्रको सुदृढिकरणमा तीव्र प्रयासहरु गर्‍यो । पहिलो विश्वयुद्धको त कुनै छोडौं, तेस्रो विश्वयुद्धसम्म पनि अमेरिकालाई विश्वले कमै विश्वास गर्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा पर्ल हार्रवार र हिरोसीमा, नागाशाकीजस्तो घटना भए जस्ले अमेरिकाको भूमिकालाई विश्वव्यापी रुपमा स्थापित गर्न थाले । तथापि दोस्रो विश्वयुद्धको विजेता राष्ट्रको जस सोभियत संघले पायो ।
सन् १९५७ एक त्यस्तो मोड थियो, जसले बेलायती साम्राज्यको युग अन्त्य भएको र त्यो ठाउँ अमेरिकाले लिएको तथ्य विश्वले स्वीकार गर्‍यो । त्यो घटना थियो– स्वीज क्यानेल युद्ध । स्वीज नहर भू-मध्यसागर र हिन्दमहासागरलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो थियो– यसमाथिको पकड जब बेलायत र इजिप्टले गुमाए, अमेरिकालाई विश्वको नयाँ महाशक्ति स्वीकार गरियो । यो लामो प्रक्रियामा अमेरिकामा लिंकन, रुजवेल्ट, आइजेनआवरजस्ता अनेक चमत्कारिक र चुम्बकीय व्यक्तित्व भएका राष्ट्रपतिहरु आए ।
तथापि अमेरिका विश्वको एकल नेता थिएन । सोभियत संघमा स्टालिनको उदयले विश्व दुई ध्रुवीय भएको थियो । त्यही बीचमा अनेक युद्धहरु भएका थिए । कोरिया युद्धले कोरिया दुईवटा भयो । अमेरिकाकै भूमिकाको कारण जर्मन एकछत्र सोभियत धुरीमा गएन । त्यहाँ बर्लिनको पर्खाल लाग्यो । भियतनाम पनि उत्तर र दक्षिण दुई देशमा विभाजित भएको थियो ।
कुनै ग्यारेन्टी थिएन कि शीतयुद्धमा अन्ततः सोभियत संघको पतन हुन्छ । बर्लिनको पर्खाल ढल्छ । पूर्वी युरोपमा कम्युनिज्मको पतन हुन्छ । र अमेरिका एकछत्र विश्वशक्तिका रुपमा उदय हुन्छ । सन् १९९० पछि जुन भूमण्डलीकरणको शुरुवात भयो, त्यसको नेतृत्वदायी देश अमेरिका नै थियो । यस क्रममा पनि अनेक पराक्रमी राष्ट्रपति आए । रिचार्ड निक्सन, रोनाल्ड रेगन, जर्ज डब्लु बुस सिनियर आदि ।
एक्काइशौं शताब्दिमा तीन ठूला संकटहरुको नेतृत्व गर्‍यो अमेरिकाले ।
पहिलो- सन् २००१ को सेक्टेम्बर ११ को घटना थियो । अलकाइदाले अमेरिकी ट्वीन टावरमा आतंकवादी हमला गरेर एउटै घटनामा करिब तीन हजार अमेरिकीको हत्या गरेको थियो । २५ हजार बढी घाइते भएका थिए ।
दोस्रो संकट- सन् २००८ को विश्वको आर्थिक मन्दी थियो । मन्दीबाट आफूलाई र प्रभावित देशहरुलाई बाहिर निकाल्न अमेरिकाले ठूलो भूमिका गर्‍यो ।
तेस्रो थियो- सन् २०१४ को इबोला भाइरस प्रकोप, त्यसको नियन्त्रणमा लागि अमेरिकाले ठूलो तदारुकता अपनाउने र लगानी गर्ने गरेको थियो । यो चरणमा जर्ज, डब्लु बुस, विल क्लिन्टन, बाराक ओबामाजस्ता सहास, धैर्यता र व्ययवस्थापकीय क्षमता भएका राष्ट्रपति अमेरिकाले पाएको थियो ।
विश्व आज एकअर्को संकटको सामु छ । अमेरिकी राष्ट्रपति छन्- डोनाल्ड ट्रम्प । ट्रम्पले आफ्नो विवादास्पद ४ वर्षे पहिलो कार्यकाल पूरा गरेका छन् । यो वर्षको अन्त्यतिर फेरि अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्ने छ । रिपब्लिकन उम्मेद्वारका रुपमा ट्रम्प पुनश्चः दोस्रो कार्यकालका लागि खडा हुने लभभग निश्चित छ ।
तर यही बीचमा ट्रम्प र अमेरिकाको भूमिकाबारे नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । के अमेरिकाले ट्रम्पको शासनकालमा आएर विश्वको नेतृत्वदायी भूमिका गुमाएकै हो, जुन उसले दोस्रो विश्वयुद्ध ताका बनाएको थियो ? अमेरिकालाई अब विश्वशक्ति मानिरहन जरुरी छ ? उसले विश्वको नेता देश मान्नु पर्ने किन ? त्यस्तो व्यक्ति वा देशलाई कस्ले नेता मान्दछ जसलाई आफ्नो बाहेक अरु कसैको चिन्ता छैन ? के कोरोना प्रकोप एउटा अर्को ‘स्वीज मुभमेन्ट’ जस्तै मोड हो, जुन बिन्दूमा ट्रम्प शासित अमेरिकाले आफ्नो भूमिकालाई आफैं हापेको छ ।
कोराना प्रकोपमा अमेरिकाको कमजोर भूमिका मात्र हैन, यस्तो तर्क गर्न सकिने अनेक कारणहरु छन् । अमेरिकासंग अझै पनि विश्वको जुनसुकै देशमा बमबारी गर्न सक्ने क्षमता होला । संसारको जुनकुनै कुनामा लुकेको जो कोही व्यक्तिलाई गोली हान्न सक्ने क्षमता होला । तर आर्थिक नीति र प्रकोप व्यवस्थापनको क्षमतामा अमेरिका हारेको छ । उसको बम, बारुद्ध, मिसाइल, फाइटर विमान, नासा, एमआइटी आदि इत्यादी सबै सानो जिवाणुसँग पराजित भएका छन् ।
सन् २०१४ को इवोला भाइरस प्रकोपको बेला यसरी कसै सोच्दैनथ्यो । इवोला नियन्त्रणमा अमेरिकाले अरबौं लगानी गरेको थियो, जबकी त्यसको प्रभाव अमेरिकामा असाध्यै न्युन थियो । इवोला प्रभावित देश नाइजेरिया, सेरालियोन, गूइना र लाइवेरिया थिए । करिब ११ मानिस मर्दा न मर्दैै इवोला नियन्त्रण गर्न अमेरिका र विश्व स्वास्थ्य संगठन सफल भएका थिए । जबकी अमेरिकामा इबोलाबाट १ जनाको मात्र मृत्यु भएको थियो ।
इवोला प्रकोपको बेला अमेरिकाले जुन तदारुकता देखायो, कोरोनाबारे ठीक उल्टो गर्यो । अमेरिका चीनलाई हियाउँन होच्याउँनतिर लाग्यो, जबकी जिवाणु विरुद्धको मानवताको लडाइँ राजनीतिक, आर्थिक र समारिक मजाको बिषय हुन सक्दैनथ्यो । आज अमेरिकामा कोरोनाबाट मर्नेहरुको संख्या १ हज्जार पुग्न लागेको छ, अमेरिका निरिह छ । न कुनै खोप आबिष्कार गर्न सकिरहेको छ, न प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्न सकेको छ । न विश्वका कोरोना प्रभावित देशहरुलाई कुनै उल्लेखनीय सहयोग नै गर्न सकिरहेको छ ।
अमेरिका एकाएक यति कमजोर किन भयो ? सायद यस्को मुख्य कारण ट्रम्पको शासनशैली नै हो । आफ्नो ४ बर्षे शासनकालमा ट्रम्प विश्वका कुनै पनि समस्याप्रति संवेदनशील भएनन् । भूमण्डलीकरणको नेतृत्व लिइरहेको देश आफै विभूमण्डलीकरणको पैरवीकर्ता बन्यो । सन् १९९० यता शुरुवात भएको भूमण्डलीकरण प्रक्रियाको कोही माइवाप रहेन । ट्रम्प जसलाई ‘गोरा राष्ट्रवाद’ को आँधीले उठाएको श्रीपेज आफ्नो शीरमा चाहिएको थियो, अरु कुनै कुरासंग मतलब थिएन, उनले कोरोना प्रकोपबारेमा बेलैमा सोच्ने र तयारी गर्ने चासो किन राख्न पर्‍यो ?
विश्वमा यस प्रकारको महामारीको अनुभव अमेरिकालाई नभएको हैन । सन् १९१८ को स्पेनिश फ्लु होस वा सन् १९६८ को बिफर, यी दुबैको प्रतिरोधमा अमेरिकाले ठूलो ताकत लगाएका थियो । अमेरिकाको संस्थागत अभिलेख र मेमेरीबाट ती घटनाहरु भेटिएका थिएनन् । यहाँसम्म की दक्षिण एशियाको मलेरिया नियन्त्रणमा समेत अमेरिकाको ठूलो भूमिका थियो ।
आधुनिक सभ्यताको चक्रवर्ती सम्राट आज कोरोना सामु निरिह छ, उसबाट न कसैले कुनै आशा राखेको छ, उ उसले संकटमा अरुलाई सहयोग गर्न सकेको छ न समस्याको कुनै समाधन सुझाउँन सकेको छ । अब अमेरिकालाई विश्वको नेता देश भन्न कसरी मिल्छ ?
सम्भवत त्यो ठाउँ अब चीनले लिदैछ । यदि यही परिदृष्य कायम रह्यो भने कोरोनापछि अमेरिका एक गणनायोग्य विश्व शक्ति रहेन छैन । यसले के सिद्ध गर्दछ भने कुनै राष्ट्रको जीवनमा कुनै गलत नेतृत्वको उदयको कति ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्दछ । यो भन्न अहिले नै हतारो हुनेछ कि चीनको नेतृत्वमा एक नयाँ विश्वव्यवस्था नै खडा हुनेछ तर यति भन्न सकिन्छ कि भूमण्डलीकरणको विद्यमान धार अब उल्टो मोडिने छ । अमेरिका केन्द्रित भूमण्डलीकरण शिथिल हुने छ र चीन केन्द्रित भूमण्डलीकरण तीव्र हुनेछ ।
फिचर पोस्ट, मनोरञ्जन
शार्ली हेब्दोले यसरी उडायो हिन्दू देवी-देवतालाई, सामाजिक सञ्जालमा तीखो बहस
फिचर पोस्ट, विश्‍व, साझापोस्ट सिफारिस
यस्तो छ कोरोना नियन्त्रण गर्न सफल मानिएका १० देशको कथा
नेपाल समूहका युवा नेताहरु पनि महन्थपथमै !
के महन्थ ठाकुर भारतको सूचना र सुझावअनुसार ओलीसँग टाँसिइरहेका हुन् ?
अर्थ / व्यापार, फिचर पोस्ट, विश्‍व, साझापोस्ट सिफारिस
सि जिन पिङको पछिल्लो आर्थिक रणनीति
यी दुई ‘ब्लड ग्रुप’ भएका मानिसमा कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च
देउवालाई रोकेपछि माधव समूहलाई कारबाही गर्ने ओली रणनीति
फिचर पोस्ट, मुख्य समाचार, राजनीति, साझापोस्ट सिफारिस
ओलीको पदमुक्त भएपछि अबको बाटो के ?
फिचर पोस्ट, राजनीति, विश्‍व
कोरोनाको कारण मोदीमाथि चौतर्फी दबाबः राजीनामाको माग बढ्दै
कर्णाली प्रदेश, देश, फिचर पोस्ट, राजनीति, साझापोस्ट सिफारिस
अनि मेरो टाउकोमा ढुङ्गा बज्रियो …
कति भयावह छ नेपालमा कोरोना संक्रमणको फैलावट ? किन गलत छ सरकारी रणनीति ?
५६ जिल्लामा निषेधाज्ञा, भोकको सङ्कट चुलिँदो
कृतघ्न कमरेडः अमिकलाई बर्खास्त गर्ने ओलीको शैलीले उब्जाएको प्रश्न
मानिसको लोभ र मुर्खताको परिणाम: वन्यजन्तुको संख्या डरलाग्दो गतिमा घट्दै
इम्युनिटी पावर बढाउन यी चीज खानुहोस्
कोरोनाको निशानामा बढी तौल र मोटोपना भएका मानिस
फिचर पोस्ट, लुम्बिनी प्रदेश, विश्‍व
कोरोनाको गम्भीर लक्षण पनि नदेखिँदै फोक्सोमा गम्भीर समस्या, यी लक्षणहरू देखिए सचेत हुनुहोस्
ओस्कार अवार्ड जितेर इतिहास रचेकी जाओमाथि चिनियाँ सेन्सरशिप !
युरोप छिरेका १८ हजार आप्रवासी बालबालिकाको अवस्था अज्ञात
१४ दिनपछि अभिभावकले बुझे ३ जना बालकको शव
दाङ, १ जेठ । दाङको तुलसीपुरमा मृत फेला परेका ३ जना बालकका परिवारजनले १४ दिनपछि शव बुझेका छन् । गत वैशाख १८ गते साँझ तुलसीपुर...
एजेन्सी, ३१ बैशाख । फ्रान्सको व्यङ्ग्यात्मक पत्रिका शार्ली हेब्दोमा छापिने कार्टुनले बेलाबेला विश्वभर चर्चा पाउने गर्छन्...
इजरायलविरुद्ध एकजुट हुँदै मुस्लिम देश, साउदीले बोलायो आपतकालीन बैठक
एजेन्सी, ३० बैशाख । इजरायल र प्यालेस्टिनी लडाकु संगठन हमासबीच जारी रक्तपातपूर्ण संषर्षलाई लिएर इस्लामिक देशको संगठन अर्गनाइजेशन...
संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि नेपाली राजनीतिले अर्कै मोड लियो । दुई वा दुइभन्दा बढी दलको वैकल्पिक...
काँग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी दिर्घकालीनरुपमा सहकार्य गर्न सहमत
काठमाडाैं, ३१ वैशाख । विपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीको उपेन्द्र– बाबुराम पक्ष दिर्घकालीनरुपमा...
प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, हेर्नुहोस् मन्त्रीहरुको सूची
काठमाडौं, ३० वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनले यसअघि आफ्नो क्याबीनेटमा रहेका...
पूर्वरानी कोमल शाह कोरोनामुक्त, अस्पतालबाट निकालियो
काठमाडौं, ३१ बैशाख । पूर्वरानी कोमल शाहलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको छ । कोरोना संक्रमण भएपछि अस्पताल भर्ना भएकी शाहलाई...
एनएसएल प्री म्याच कनफ्रेन्स : धनगढी र काठमाडौं दुबै टोलीद्वारा उपाधी जित्ने दावी
काठमाडाैं, ३१ वैशाख । नेपाल सुपर लिगको उपाधिका लागि शनिबार धनगढी एफसी र काठमाडौं रेजर्सविच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । प्रतिष्पर्धाको...